House for Sale in Hmawbi - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Houses for Sale in Hmawbi
အထူးဈေးနှုန်းဖြင့် ညှိနှိုင်းရောင်းချသွားပါမည်...မှော်ဘီ အခန်း ( 𝟐 𝟎 ) ပေ ( 𝟒 𝟎 𝐱 𝟔 𝟎 ) ( 𝟐 ) ထပ်...
Phone No. To Contact Golden Asia Real Estate and General Service Co.,Ltd.
Ad Number S-10060583
Golden Asia Real Estate and General Service Co.,Ltd. Close
မှော်ဘီမြို့ ကြက်ဖြူကန်ရပ်ကွက်ရှိ ၁၂ ခန်းတွဲအဆောင်ရောင်းမည်
680 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10037227
မှော်ဘီ အနားယူ အပန်းဖြေရန်အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသောအိမ်နှင့်ခြံရောင်းမည်
Ad Number S-9992653
Ad Number S-9970932
မှော်ဘီမြို့နယ် လုပ်ငန်းအပါ ခြံကျယ် လုံးချင်းအိမ် ရောင်းမည်
Ad Number S-9948445
မှော်ဘီ၊ ညောင်နှစ်ပင် ခြံနဲ့ အိမ် ရောင်းမည်။
Ad Number S-9945218
Grand House and Land for sale
22,000 Lakh (Kyats)
Ad Number S-9917611
Ad Number S-9916738
Ad Number S-9915789
Dream White House for Sale
Ad Number S-9902341